Ururki ONLF oo hadda Garawsadday in ay lama huraan tahay in ay badasho magaca. – Xeernews24
Ururki ONLF oo hadda Garawsadday in ay lama huraan tahay in ay badasho magaca.
Gudoomiyaha ururka ONLF, Maxamad Cumar, ayaa sheegay in ururkiisa diyaar u yahay qaadashada magac mideyn kara dadka Soomaaliyeed ee DDS. Admiral Maxamad Cumar, oo la kulmay qaar kamid ah madaxda dhaqanka ee DDS, ayaa xusay in dadka meesha isugu yimid u qalmaan inay soo jeediyaan magac ay ku jirto danta halganka, shacabka iyo dalku oo lagu midoobo.
ONLF, oo la asaasay 1984kii, ayaa ku dhagan magaca ‚Ogaden‘ iyada oo ku dooda in magacan uu yahay summada iyo astaanta gobolka.
Waxaa xusuus mudan, in xoghayaha guud ee ururku uu toddobaadyo kahor tilmaamay inayana ururka u qorshaysnayn inuu hadda magaca badalo. C/raxman Mahdi, oo waraysi dheer siiyay jariirada Addistandard, ayaa taabtay ahmiyada Juquraafi iyo siyaasadeed ee ay magaca ugu xisheen.
Inkastoo jabhada kusoo celcelisay inay u taagan tahay danaha Soomaalida gobolka oo idil, haddana waxaa jira dad ku dooda inay tahay jabhada qabiil. Dadka dooda qaba ayaa inta badan cuskada magaca jabhada iyo dhismaha gudiyada kala sareeya ee ururka oo u badan hal qabiil.
Gudoomiyaha ayaa madaxda dhaqanka u qeexay in ururku u taagan yahay danaha Soomaalida gobolka oo idil isaga oo hoosta ka xariiqay inay beelo badan gobolka dagaan. Wuxuu intaa ku daray, in uuna jirin jacayl gaar ah oo uu ururku u hayo qabiilka Ogaadeenka.
Hadalka gudoomiyaha ayaa loo fasirin karaa talaabadii ugu horeysay ee uu ururku u qaado dhanka isbadalka. Ururka ayaa dhowaan heshiis la galay Ethiopia iyada oo nuxurka heshiisku ahaa in ONLF halgankeeda si nabad ah u wadato.
Inkastoo jabhadu qaybo badan oo bulshada ah la kulantay islamarkaana qabatay shirar badan, haddana wali ma qeexna barnaamijkeeda cusub ee ku aadan halganka nabadeed ee ay damacsan tahay marka laga reebo inay noqotay xisbi siyaasi ah oo doorashada isu diyaarinaya.
Waxaa la hadal hayaa shirweyne ururku ku qaban doono Godey bisha soo socota iyo xogo kale oo sheegaya in isbadal lagu samaynayo hogaanka sare ee ururuka.
Caqabadaha ugu culus ee ururka horyaala waxaa kamid ah in uu ku qanciyo bulshada gobolka badankeeda barnaamijkiisa siyaasadeed iyo abuurida midnimo dhankiisa ah iyo mid Soomaaliyeedba. Waxaa kale oo ururka iyo taageerayaashiisa muhiim u ah sidii ay uga badbaadi lahayeen beeleysiga iyo gobolaysiga hadheeyay bulshada Soomalida.
ONLF waxa ay soo xidhay cutubkii ahaa halganka qoriga iyada oo xeerinaysa duruufaha gobolka iyo isbadalka Geeska Afrika, hasayeeshe waxaa u bilaabmay cutub cusub oo leh ahmiyadiisa iyo duruufihiisa adag.
Gudoomiyaha ONLF Admiral Mohammed Omar Osman oo Dhaar Kumaray Inayna Qabiil Gaara Matalin ONLF Islamarkaana Odayaasha Ka Codsaday Inay Layimaadaan Magicii Lagu Badalilahaa Ka ONLF oo Ay Jiraan Dadbadan oo Magac Qabiil u Arka.SDM Addis Ababa Ethiopia Qalinka Soojeeda
Slået op af SDM i Torsdag den 24. oktober 2019
Hogaamiyaasha ururka iyo siyaasadaha ay soo bandhigaan ayey ku xidhan tahay inay jabhadau horay u ruqaansato, halkeeda joogto ama ay simbririxato.
Arrinta magaca ee gudoomiyuhu ka hadlay waa qurub kamid ah dhibaatada bulshadu ku mashquulsan tahay, laakiin baaxada dhibaatada gobolka iyo xalkeedu kuma koobna magac ama lagu dhaganaado ama la badalo.
Ma jiro xilli ka wanaagsan oo la bilaabi karo sidii bulshada gobolku uga doodi lahayd danteeda marka la fiiriyo fursadaha ka jira Ethiopia ama khataraha ku aadan xiliga kala-guurka ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/onlf.jpg 140 200 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-25 16:16:322019-10-25 16:16:32Ururki ONLF oo hadda Garawsadday in ay lama huraan tahay in ay badasho magaca.
Wararkii ugu dambeeyey XIISADDA ka dhex-aloosan dalalka MASAR iyo ITOOBIYA. Hoggaamiyayaasha Dalalka Jabuuti Iyo Soomaaliya Oo Shir Deg-deg Ah Ku Baaqa...